Athletic Bilbao oo ku guuleysatay koobka Spanish Super Cup, kaddid markii ay ka adkaatay Barcelona… +SAWIRRO – Gool FM
(Spain) 18 Jan 2021. Athletic Bilbao ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay koobka Spanish Super Cup, kaddid markii ay kaga adkaatay kooxda Barcelona 2-3, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Fir Park.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Barcelona iyo Athletic Bilbao ku kala nasteen barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 40-aad Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay Antoine Griezmann.
Laakiin isla 42 daqiiqo mar ay ciyaartu mareysay Athletic Bilbao ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Oscar de Marcos, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Inaki Williams.
Daqiiqadii 77-aad Barcelona ayaa markale hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 2-1 ka dhigay Antoine Griezmann, iyadoo uu caawinta goolkan lahaa Jordi Alba.
Daqiiqadii 90-aad kooxda Athletic Bilbao ayaa la timid goolka barbardhaca kaddib markii uu 2-2 ka dhigay dheesha xiddigooda Asier Villalibre, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Iker Muniain.
90-ka daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ayaa ku soo gabagabooway barbardhac 2-2 ah oo ay isku mari waayeen labada koooxood Barcelona iyo Athletic Bilbao, waxaana loo baahday 30 daqiiqo oo dheeri si loo go’aamiyo kooxda ku guuleysaneysa koobka.
Daqiiqadii 94-aad kaadib waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray Athletic Bilbao ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 2-3 ka dhigay Inaki Williams, xilli caawinta goolkan uu lahaa Iker Muniain.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-3 oo ay Athletic Bilbao kaga adkaayay kooxda Barcelona, Athletic ayaana ugu dambeyntii sidaas ugu guuleysatay koobka Spanish Super Cup.